Mkpakọrịta nwoke na nwanyị Maka Girlsmụ nwanyị! Bọchị n'efu, Nnọpụta nkwado & Ebe a na-enweta shuga
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị Bọchị n'efu, Nnọpụta nkwado & Ebe a na-eme mkpọtụ
Nzuko mkpakọrịta nwoke na nwanyị maka ụmụ nwanyị ebulitela afọ. N’oge gboo, ụmụ nwanyị na-achọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị, mmekọrịta ndụ na nkwụsi ike. Ka afọ na-aga, ha na-enwekwu mmasị karị na ego na akụrụngwa gụnyere nkwere, ụbọchị efu, onyinye dị oke ọnụ na njikọ aka okomoko site n'oge ruo n'oge.
Otu n’ime ụzọ ụmụ agbọghọ si achọ ụmụ nwoke bara ọgaranya karị bụ isonye na njikọta njikọta njikọta ntanetị na ntanetị ga-adabara ha na ụmụ nwoke ha chọrọ. Zọ ọzọ ha si eji ya eme bụ ịrapara n’ebe ndị ọgaranya na-eleta ha ugboro ugboro, ka ha wee nwee ike ịbịakwute ha dabere na mmasị ha. Uzo abuo di nma nke oma na-adabere na udi aru nwanyi, ntukwasi obi na udiri ya.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị maka Girlsmụ nwanyị
Youngmụnwanyị na - enwe nhọrọ dị iche iche ma a bịa n’ịchọ ndị nwere shuga. Ijikọ ihe saịtị njikọ ntanetị; bụ otu n’ime nhọrọ ndị kachasị ewu ewu. Nmekorita shuga diri umu nwanyi di nma karie na ngwa, n'ihi na o puru inyere ndi nwoke na ndi nwanyi aka inweko.
Freebọchị n'efu anaghị adị mfe site na saịtị ndị a. Dịka nwa agbọghọ, ị ga-ebu ụzọ ghọta ihe ndị okenye ndị a na-achọ, wee rụ ọrụ maka ya tupu ha abanye na saịtị njikọ ọ bụla. Ghọta na ihe ka n’ọnụ ọgụgụ na-achọ nwa agbọghọ nke ga-egboro ha mkpa anụ ahụ ha, na n ’ụzọ ha ga-eweta nkwado ego na akụrụngwa n’ụdị ihe okomoko na ahụmịhe.
Buru n’uche na ichota saịtị kacha mma njikọta ma ọ bụ nzute na-agụnye ịchọọ nke ama ama na mpaghara ma ọ bụ obodo gị. Isonye na saịtị dị na mba ị na-anaghị agakarị na-ebelata ohere ị ga-eji nwee ọmarịcha shuga ụmụ nwanyị na-eme. Anyị na-atụ aro ka Sugar Babies na-eme nyocha miri emi ma gakwuru ndị nwere ụdị echiche. N’oge na-adịghị, ị ga na-enwetụ ụbọchị, ihe n’ego buru ibu na onyinye dị oke ọnụ.
Dbọchị Na-anọghị Niile Maka Girlsmụ nwanyị
Ọ na - ekwe omume n'enwe mmekorita shuga maka ụmụ agbọghọ. Nke a chọrọ ịga ebe ị ga - ezute nna nna onye nwere ike inwe mmasị na mkpakọrịta gị. Usoro ị ga - esi zute onye gị na ya nwere ike ịbụ onye gị na ya na-akpachi anya. Rịba ama ndị nwere nnukwu ego ma meghee mmekọrịta ha na ụmụ agbọghọ.
N'adịghị ka saịtị ntinye & njikọta ntanetị, usoro a iji na-azụ ụmụ agbọghọ chọrọ ụfọdụ ego itinye ego. Nke a bụ n’ihi na ị ga-emefu ego iji gosipụta n’ụfọdụ ebe ndị a bara ọgaranya na-eleta. Ọ na-achọkwa obi ike iji dabere gburugburu ha ma jiri ụzọ aghụghọ bịakwute ha. Site ugbu a gaa n'ihu, ị ga-enwe nnukwu ego, ụbọchị efu, onyinye ndị okomoko na ndụ ibi ndụ okomoko.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị maka atụmanya nwanyị
Mkpakọrịta shuga nke ụmụ nwanyị abụghị ihe ịga nke ọma ozugbo dịka ọtụtụ mmadụ tụrụ anya na ọ ga-adị. Ọ na-ewe oge iji wulite ntụkwasị obi ka papa shuga wee mara nwanyị ahụ ya na ya nọ bara uru ihe ọ na-enye na nkwụghachi. Ka ndị ọzọ nwekwuo ntụkwasị obi na njikọta karịa ego, ụbọchị efu na onyinye ha dị njikere inye. Ọ dịghị mfe ịtụkwasị onye ị zutere ozugbo na ebe a na-eme mkpọkọta ma ọ bụ ihe omume mpaghara.
Ọtụtụ mmadụ na-atụ anya na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ịkpa maka ụmụ agbọghọ gụnyere ọtụtụ ihe nzuzo. Oge agbanweela na ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị emeghewo mmekọrịta nne na nna shuga na shuga. Ndokwa na-egosikarị shuga shuga na-esonyere shuga nna ha maka ihe omume yana ikekwe nzukọ azụmahịa n'obodo. A na-atụ anya Sugarmụaka Sugar mgbe niile na-adọrọ adọrọ ma na-enye ụlọ ọrụ bara uru ka ha na-agagharị na ụwa na ndị enyi na ndị mmekọ azụmahịa.
Alụ nwanyị shuga dịịrị ụmụ agbọghọ abụghị maka ụmụ nwanyị nwere ụdị agwa ara. Ọtụtụ n’ime ndị okenye ndị a bara ọgaranya ji ọrụ n’aka na owu ọmụma. Ya mere, a na-atụ anya na nwa shuga dị obere, mara mma ma jupụta na ndụ. Tupu isonye na saịtị njikọ ọ bụla, hụ na omume gị dị egwu ma nwee ike ịkwagide ya. Nna shuga ga - enye gi ego nile ichoro, ubochi na onyinye inwere ma o buru na ndu juru gi.
Echiche ndị na-ezighi ezi banyere ụbọchị efu na ụmụ agbọghọ
Echiche a na-ezighi ezi na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ịkpa maka ụmụ nwanyị yiri ọrụ nwoke na nwanyị ga-eji olile anya kwụsị site na oge n’ihi na ọ bụ naanị ụdị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Girlsmụ agbọghọ nwere mmasị na ego karịa, onyinye oke ọnụ dị oke ọnụ na ụbọchị efu anaghị eme ihere ịga leta saịtị ọ bụla nke njikọta nkịta ga-enye ha ihe ha na-achọ. Onweghi ihe ojoo n’enwe echiche di iche na nmeko.
Zọ ọzọ n’echiche bụ na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ịkpa maka ụmụ nwanyị bụ ụfọdụ ụdị mgbapụ. Na ha na-achọ ụzọ dị mfe iji na-ebi ndụ ha na naanị otu ihe ha chere dị ka ụmụ nwoke ka aba ọgaranya. Ọ bụ ya mere e kwenyekwara na ha na-emebi ụkpụrụ ha maka uru ego na akụnụba. Ka anyị cheta mgbe niile na nke a yiri ụdị mkpakọrịta nwoke na nwanyị ọ bụla ebe ụmụ nwanyị na-ezute ụmụ nwoke na saịtị njikọta njikọ & pade, ha na-aga maka ụbọchị ole na ole n'efu, jikọọ ma kwenye na otu esi aga n'ihu mmekọrịta ahụ.
Mgbe ị na-egbu ume, mmekọahụ adịghị mkpa! Will ga - ahụ na ụfọdụ ụmụ nwoke ndị okenye chọrọ naanị nwa agbọghọ ka o nye dị ka ha na - enwetara nsọpụrụ, mma na ntị. .. Na nloghachi nwa shuga na - enweta enyemaka ego na ụbọchị efu. Nri Anyasị, ọ drinksụ drinksụ na ụfọdụ obere mmanya shuga nwa mgbe mkparịta ụka abalị ga-adị oke njọ, ọ bụghị ya?
Mmekọ a na-abụghị inwe mmekọahụ adịghị ahụkebe, ebe ọ bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-achọ njikọ aka nke gụnyere ihe karịrị naanị mkparịta ụka. Mgbe ị na-edebanye aha na saịtị njikọ ọ bụla ma ọ bụ zute, ọ dị mkpa ịmata ihe dị gị mma. Nke a ga - enyere gị aka izere nghọtahie ọ bụla n'etiti nwa shuga, mama ma ọ bụ papa shuga.
OsoteNweta suga mama, mama & sugar Daddie. Mpaghara Njikọ »
Previous «Best mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nrụọrụ weebụ n'ihi na ụbọchị # 1 [Nkata na ]bọchị]
Tags: Ebe a na-eme ebe a na-ezukọta ihe na ebe ana-eme nnabataGay Lesbian Sugar Dating saịtịNna Sugar / Sugar Mama / Sugar Baby & Sugaraters